News Collection: २५ वर्षे जोबनलाई सलाम छ
२५ वर्षे जोबनलाई सलाम छ
छिमेकी अञ्जली श्रेष्ठले बुनु केसीलाई करिश्मा बनाइदिँदा उनलाई त्यसको अर्थ थाहा थिएन। गार्मेन्टमा काम गर्दै स्कुल पढिरहेकी यी किशोरीलाई देख्ने पुरुष पहिलो नजरमै टोलाउन बाध्य हुन्थे। त्यही सौन्दर्यलाई न्याय गर्न, अन्जलीले उनलाई चलचित्र नगरीकी करिश्मामा रूपान्तरण गरिदिइन्। करिज्मा अर्थात् 'आफूतर्फ खिच्न सक्ने आकर्षण भएकी' करिश्मा नामको आज पनि उत्तिकै धाक छ। प्रस्ट हिमाल देखिने आफ्नो घरको छतमा केही बेर गफिएपछि करिश्माले भनिन्-'उर्दू भाषामा करिश्माले जादुको अर्थ पनि बोक्छ क्यार !' सौन्दर्यको यो जादु अर्थात् तिनै करिज्मा अहिले २५ वर्ष पुगेकी छिन्। बुनुबाट जोड्दा त उनको उमेर ४० नाघ्ला, तर करिश्मा भएयताका २५ वसन्त पार भएका छन्।
छिमेकी अञ्जली श्रेष्ठले बुनुलाई करिश्मा बनाइदिँदा उनलाई त्यसको अर्थ थाहा थिएन। गार्मेन्टमा काम गर्दै स्कुल पढिरहेकी यी किशोरीलाई देख्ने पुरुष पहिलो नजरमै टोलाउन बाध्य हुन्थे। यही सौन्दर्यलाई न्याय गर्न, अन्जलीले उनलाई चलचित्र नगरीकी करिश्मामा रूपान्तरण गरिदिइन्। करिज्मा अर्थात् 'आफूतर्फ खिच्न सक्ने आकर्षण भएकी' करिश्मा नामको आज पनि उत्तिकै धाक छ। प्रस्ट हिमाल देखिने आफ्नो घरको छतमा केही बेर गफिएपछि करिश्माले भनिन्-
'उर्दू भाषामा करिश्माले जादुको अर्थ पनि बोक्छ क्यार !'
सौन्दर्यको यो जादु अर्थात् तिनै करिज्मा अहिले २५ वर्ष पुगेकी छिन्। बुनुबाट जोड्दा त उनको उमेर ४० नाघ्ला, तर करिश्मा भएयताका २५ वसन्त पार भएका छन्।
बूढो बाघ अर्थात् निर्देशक प्रकाश थापाले किशोरी करिश्मालाई देख्दा सम्मोहनको त्यही जादुले काम गरेरै हुनसक्छ, उनले चलचित्र सन्तानमा ब्रेक पाइन्। स्व. प्रकाश थापाको सन्तानबाट सुरु भएको करिश्माको फिल्मी यात्रा छायांकन भैरहेको दिनेश डिसीको मायाजबारसम्म कायमै छ। यसबीच उनले करिब २ सय चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। सकारात्मक सोचकै कारण उनले यति लामो यात्रा सहजै पार गरेकी हुन्। समकालिन र आफूभन्दा अघिका नायिकाहरूको भीडमा उनले आफूलाई पृथक् रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुमा पनि सकारात्मक सोच र परिस्थितिअनुसारको सही व्यवहारले काम गरेको छ। करिश्मा आफैं भन्छिन्- 'म रक्सी पिउँदा पनि सकारात्क ऊर्जाका लागि पिउँछु, त्यसले मातिँदा पनि सकारात्मक मात्र सोच्छु।'
करिश्मासँग खै के कुरा छ कुन्नि, सुन्दरीको ट्याग भिराउनुपर्दा नेपालीहरू सबैभन्दा पहिले उनकै नाम लिन्छन्। नायिकाका रूपमा २५ वर्षे अभिनय यात्रापछि पनि सुन्दरता हल न चल गरी यथावत् रहनु नै करिश्माले अद्यावधि त्यो महत्त्व पाउने आधार हुनसक्छ। स्वयं करिश्मा पनि आफूसँग के त्यस्तो जादु छ भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ छिन्। उनी भन्छिन्, 'हेर्ने आँखा नै राम्रा भएर हुनसक्छ, मैले आजसम्म आफ्नो सौन्दर्यको प्रशंसा नै सुनिरहेकी छु।'
अहिले पनि २५ वर्षे नै देखिनु उनको खुबी हो। यी षोडसी नोस्टाल्जिक हुँदै हिमालतर्फ हेर्दै साप्ताहिक संवाददातासँग कुरा गर्दै थिइन्। उनले भनिन्- ' फर्केर हेर्दा यो २५ वर्षमा करिश्माको जीवनमा थुप्रै आयाम थपिएका छन्।' रिलमा भिन्न भूमिकाप्रति न्याय गर्ने अभिनय मात्र होइन रियल लाइफमै बे होरेका थुप्रै उतारचढावले पनि करिश्मालाई परिपक्व बनाएका छन्। त्यही भएर हुनसक्छ, शारिरिक सौन्दर्यलाई मात्र होइन, उनले बौद्धिक सौन्दर्यलाई पनि समयअनुसार 'मेन्टेन' गर्न सकेकी छिन्।
बुढ्यौलीले आक्रमण गर्न थालेको उनको शारीरिक सौन्दर्यमा मानिसहरू किन अझ मोहित हुँदै गएका होलान त ! करिश्मा फिस्स हाँसिन् र लजालु भावमा भनिन्- 'मेन्टेन्ड म्याच्योर्ड विमेन फेस त झन् अट्रयाक्टिभ हुन्छ नि, अहिले पनि जेनिफर लोपेजप्रति आकषिर्त हुनेहरू उत्तिकै छैनन् त ?' निर्देशक शम्भु प्रधान पनि उमेर बढ्दै जाँदा करिश्मामा आकर्षणको लाली थपिँदै गएको बताउँछन्। 'मैले २५ वर्षअघि चलचित्र मायालुका लागि करिश्मालाई लिँदा पोक्ची सानी केटी, नायिका भन्न सुहाउने आकर्षक गेटअप पनि थिएन, त्यो समय नै पनि त्यस्तै थियो।' शम्भुले सम्झिए- 'पछि सपनामा लिँदा त्योभन्दा धेरै राम्री पाएँ, अहिले त उनमा यति निखार आएको छ कि राम्री भन्नेबित्तिकै सबैको ओठमा करिश्माकै नाम आउँछ।'
चलचित्र पाहुनामा अभिनय गरेपछि २०६१ सालमा एक्कासि उनी अमेरिका पुगिन्। करिश्मा अमेरिका पुग्नुका पछाडि थुप्रै कारण थिए। आफूले बनाएको चलचित्र बाबुसाहेबको घाटादेखि लगातारको अभिनयबाट आराम लिन केही समय अमेरिका बरालिएको भन्ने सुनिए पनि पाताल भासिने अरू थुप्रै कारण पनि थिए। करिश्माकै शब्दमा भन्नुपर्दा उनले केही वर्षभित्रै त्यसका बारेमा कुनै पुस्तक वा लेखमार्फत प्रस्ट्याउनेछिन्। अहिलेलाई यति मात्र, अमेरिका उनी पैसा कमाउन गएकी थिइनन् र कमाइनन् पनि। अमेरिकाबाट नेपालीहरूकी यी जादु परीलाई फेरि नेपाल भित्र्याउन श्रीमान् विनोद मानन्धरले ८ हजार अमेरिकी डलर नेपालबाटै पठाउनुपरेको थियो।
मायालु, मनकामना, अरुणिमा, सपना, साथी, अल्लारे, १ नम्बरको पाखे, ट्रक ड्राइभर, ढुकढुकी, पापी मान्छे, सारंगीजस्ता दर्जनौं सफल चलचित्रकी नायिका करिश्मा मानन्धरले अहिलेसम्म बेस्ट एक्ट्रेस एवार्ड भने पाएकी छैनन्। निरन्तर अभिनय क्षेत्रमा सक्रिय भएबापत डिकेड एवार्ड पाए पनि अहिले पनि उनी बेस्ट एक्ट्रेस एवार्ड पाउन उत्तिकै लालायित छिन्। 'एवार्ड नपाए पनि मैले जीवनमा धेरै कुरा पाए, चलचित्रको बजेटअनुसारको राम्रै पारिश्रमिक पाएँ, त्योभन्दा मुख्य कुरा माया गर्ने प्रशंसकहरू पाएँ,' करिश्माले भनिन्- 'यसमा मेरो निरन्तरको कर्मको सहायक भूमिका होला तर मुख्यतः भाग्य बलियो मान्छु।'
करिश्मा संघर्षपूर्ण जीवनबाट उठेकी नारी हुन्, तर उनको शारीरिक बनावटले उनी राजसी ठाँटमा हुर्किएको प्रतीत हुन्छ। कुनै राजकुमारीझैं लाग्ने करिश्मा वास्तवमै चमत्कारिक लाग्छिन्। उनले अभिनय यात्रामा राजकुमारीका रूपमा त अभिनय गरिनन्, तर चलचित्रमा उनको भूमिका अक्सर धनी बाबुकी छोरीकै रूपमा फिट भयो। उनी सम्पन्न परिवारकि चुलबुले छोरीका रूपमा देखिइन्। सञ्चारकर्मी तथा गीतकार बाबुराम दाहालका अनुसार चलचित्र साथीमा स्कर्टमा उनको अभिनय बेजोड खुल्नुका पछाडि सौन्दर्य र उनीसँग फिट हुने भूमिका नै मुख्य कारण थियो।
करिश्माको २५ वर्षे रजतपट यात्राकै क्रममा बिर्सन नसकिने थुप्रै चलचित्रमा उनले अभिनय गरेकी छिन्, तर त्यसमध्ये तीनवटा चलचित्र अर्थपूर्ण छन्। पहिलो सन्तान, जसमार्फत उनको नायिकाका रूपमा सिनेयात्रा प्रारम्भ भएको थियो। दोस्रो ऐतिहासिक चलचित्र वसन्ती, वसन्तीमा उनी दरबारिया गगनसिंहकी प्रेमिका थिइन्। त्यसमा उनले वसन्तीको चरित्रप्रति न्याय गर्ने गरी अभिनय गरिन् अनि तेस्रो चलचित्र क्षेत्रबाट कमाएको नाम एवं दामलाई त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर चलचित्र ढुकढुकी निर्माण गरिन्। फस्ट ब्रेक, एक्टिङ र मेकरका रूपमा यी तीन चलचित्रमा आइसकेपछि अब उनीसँग एउटा गन्तव्य छ, त्यो हो निर्देशनको।
धेरै कमलाई थाहा होला, पहिलो पटक मैले नेपाली चलचित्र 'भाग्यरेखा' मा अभिनय गर्ने भएपछि करिश्माजी मेरो को-स्टारका रूपमा उक्त चलचित्रमा अनुबन्ध हुनुभएको थियो। मैले पहिलो पटक मुहूर्त सट दिएकी नायिका हुन्, करिश्मा। आखिर उक्त चलचित्रमा न मैले न करिश्माजीले नै काम गर्‍यौं। मैले चार-पाँचवटा चलचित्रमा काम गरिसकेपछि करिश्मासँग भाउजू चलचित्रमा पहिलो पटक काम गरें। करिश्माजीले नेपाली चलचित्रमा काम गरेकै २५ वर्ष भएछ, म त भर्खर २५ वर्ष पुगें, (हाँसो), जे होस् करिश्माजीसँग काम गर्दा मलाई सहज लाग्यो। उहाँ असाध्यै व्यावसायिक कलाकार हो। काम धेरै गरे पनि हाम्रो सम्बन्ध सधैं व्यावसायिक मात्र रह्यो। नजिक भएर सामाजिक हिसाबमै सँगै बसेर कफी खाइएन। अहिले त्यसबेला व्यक्तिगत रूपमा किन नजिक भइएन होलाजस्तो अनुभूति हुन्छ। हामीले करिब ५० वटा फिल्ममा नायक नायिकाका रूपमा काम गरे पनि उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा एक-दुईवटा संवादबाहेक भएन। अचम्म त के भने मैले करिश्माजीका श्रीमान् विनोदजीसँग करिश्माजी भन्दा बढी गफ गरेको हुँला। करिश्माजीलाई चिन्दा मैले उहाँलाई असाध्यै मेहनती कलाकारका रूपमा चिनें। राम्री हुनुहुन्छ, आवश्यक सुन्दरता पनि छ, बानीबेहोरा पनि राम्रो छ। आफूले गरेको कुनै कार्यलाई लिएर वा अरू कुनै कुरामा पनि अनावश्यक गुनासो गर्नुहुन्न। करिश्माजी कलिलो उमेरमै सिनेक्षेत्रमा आउनुभयो, त्यसपछि निरन्तर काम गर्नुभयो। मैले उहाँले निर्माण गरेको चलचित्र ढुकढुकीमा पनि काम गरें। कलाकारको हिसाबमा ९० वर्षसम्म पनि नायक-नायिकाले अभिनय गर्न सक्ने भएकाले उहाँ अझै यो क्षेत्रमा सक्रिय रहनुहुन्छ। उहाँ समर्पित कलाकार पनि भएकाले उहाँले अभिनयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। करिश्माजीसँग मेरो ट्युनिङ वास्तवमै मिलेको हुनुपर्छ, त्यही भएर हामीलाई लिएर पटक-पटक चलचित्र निर्माण भए, त्यसमध्ये धेरै सफल भए। हाम्रो केमेस्ट्री मिल्ने रहेछ। उहाँको चलचित्र उद्योगमा पुनरागमन भएको छ, चुनौतीका रूपमा नयाँ पुस्ताका साथमा काम गरिरहनुभएको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो।
अञ्जली श्रेष्ठ, कलाकार, करिश्माकी अभिभावक
करिश्मामा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सकारात्मक सोच नै हो। उनी जुनसुकै कुरालाई पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छिन्। मेरो विचारमा आजकी करिश्मा भनेको बलिउडका अमिताभ बच्चन बराबर हुन्। अभिभावकका रूपमा मलाई यसो भन्दा गर्व लाग्छ। खासगरी नायकको तुलनामा नायिकाको करियर छोटो हुन्छ, यो बलिउड र कलिउडमा देखिएकै कुरा हो, तर आज २५ वर्ष पछाडि पनि चल्तीका कलाकारहरूभन्दा बढी पारिश्रमिक लिएर उनी व्यावसायिक रूपमै सक्रिय छिन्। चलचित्र वा विज्ञापन जुनसुकै क्षेत्रमा उनले आफूलाई बलिउडका बच्चनझैं व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन्। पाँच वर्ष अमेरिकामा बसेपछि पनि उनको रि-इन्ट्री सहज हुनुमा उनको नम्र व्यवहार र मेन्टेन्ड फिगर कारक हुन्। करिश्माले नेपाली चलचित्र उद्योगको बजार विस्तारका निम्ति सधैं लचक हुँदै सहकार्य गरिन्। कसैले म डुबें भन्दा उसलाई उठाउन उनी चिन्तित रहन्थिन्। करिश्माको अर्को उल्लेख गर्न लायक कुरा उनी स्पट ब्वाइदेखि डाइरेक्टरसम्म सबैसँग एकैनासको व्यवहार गर्छिन्।
शम्भु प्रधान, चलचित्र निर्देशक
सन्तान प्रदर्शनमा आइसकेको थिएन, म त्यसबेला मुम्बईमै थिएँ, यो चलचित्र सम्झना प्रदर्शन भएपछिको (२५ वर्षअघिकै) कुरा हो। चलचित्र मायालु निदेर् शन गर्ने भनेर सबै तयारी सकेको थिएँ, मलाई नायिकाका रूपमा नयाँ अनुहार चाहिएको थियो। नेपाल आएपछि नायक प्रकाश अधिकारीले एउटी केटी छ भनेर करिश्मालाई लिएर आए। पोक्चो गाला भएकी खासै नायिकाजस्तो पनि नलाग्ने ती केटीलाई लिनुअघि मैले दुई-चारवटा सिन दिएर अभिनय गर्न लगाए। अभिनय राम्रै लाग्यो र मायालुका लागि लिएँ। हुन त त्यो समयमा अहिलेजस्तो अपडेट फेसनेबल नायिकाको कल्पना गर्नु पनि आवश्यक थिएन, औसतमा करिश्मा राम्रै लाग्थिन्। धेरै पछि मैले सपनामा काम गर्दा मायालुकी करिश्मा धेरै अपडेट, मेन्टेन्ड र राम्री लागिन्। करिश्मामा जति उमेर ढल्किन्छ, त्यति राम्री हुने गुण रहेछ। करिश्मा जत्तिको राम्रा अरू थिएनन् भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। तृप्ति, कृष्टि, गौरी, मौसमी, जल आदि राम्रा नायिका पनि नेपाली चलचित्रमा आए, तर उनीहरू आज यहाँ छैनन्। त्यसैले पनि करिश्माको उपस्थिति नै आज उनको सफलताको आधार हो। करिश्मा राम्री छिन्, तर अहिले उनले सोलो फिल्म बोक्न सक्दिनन्। राजेश, भुवन, करिश्माहरूले अब कथाअनुसार लिड क्यारेक्टरमा अभिनय गर्न सक्छन्, तर उनीह रूका निम्ति बलिया नयाँ सहयोगी आर्टिष्ट चाहिन्छ।
मेरो बुझाइमा करिश्मा मानन्धर नेपाली रजतपटमा बलियो इतिहास बोकेकी नायिका हुन्। मैले उनलाई चलचित्र क्षेत्रमा आउनु अगावै देखेको हुँ। उनले सन्तानमा अभिनय गरिसकेपछि चलचित्रकै कामको सन्दर्भमा उनीसँग प्रत्यक्ष चिनजान भयो। सफल कलाकार बन्न पक्कै सजिलो छैन्, तर नेपाली चलचित्रमा करिश्मा मानन्धरले सफल कलाकारको ट्याग पाइसकेकी छिन्। करिश्माको सौन्दर्यको कुरा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। म पनि उनको सुन्दरताको प्रशंसक हुँ। करिश्माको सौन्दर्य अन्य नायिकाको भन्दा पृथक छ। आँखा चिम्म गरेर करिश्मालाई सम्झने बित्तिकै त्यो अलग किसिमको सौन्दर्य अनुभव गर्न सकिन्छ। लामो अनुहार, कतै आर्यन कतै मंगोल जस्तो लाग्ने अलग्गै आकृति उनमा छ। करिश्मा आज यति लामो समयसम्म पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छिन्, उनको सौन्दर्यमा अझ निखार आएको छ। करिश्माले पहिलो चलचित्रमै खारिएका निर्देशकसँग काम गरिन्, त्यसले उनको सुन्दरताका साथै अभिनय क्षमता पनि वृद्धि गर्‍यो। उनले जस्तो गुरु पाइन्, त्यस्तै किसिमले मेहनत पनि गरिन्। कामलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिएर लगातार कलाक्षेत्रमा समर्पित रहिन्, त्यसैले उनलाई आज यो उचाइ प्रदान गरेको हो। कलाकारभित्र हुने बलियो आत्मविश्वास करिश्मामा छ, त्यही भएर उनी डे प्थमा गएर अभिनय गर्न सक्छिन्। उनको बानी बेहोरा पनि उत्तिकै प्रशंसनीय छ। कसैले नाई, हुन्न, गर्दिनजस्ता नकारात्मक पक्ष उनले प्रस्तुत गर्दिनन्। कसैको मन पनि दुखाउँदिनन्। सौन्दर्यलाई कायमै राखेकाले उनी अहिले पनि नायिका हुन सक्छिन्।
करिश्मा दिदीसँग मैले पापी मान्छेमा काम गरे। उहाँ जति सुन्दर हुनुहुन्छ, उहाँको मन पनि त्यति नै सुन्दर छ। लामो इतिहास बोकिसकेकी उहाँजस्ती वरिष्ठ कलाकारले उक्त चलचित्रमा काम गरुन्जेल मलाई साथीको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो। सिनियर जुनियरको कुनै भेदभाव नराखी नयाँपुस्तासँग राम्रो व्यवहार गर्नु उहाँको बडप्पन हो। त्योभन्दा मुख्य कुरा नायिका भएर पनि २५ वर्षसम्म आफूलाई उत्तिकै फिट राख्न सक्नु उहाँको सबल पक्ष हो। भुवन केसीदेखि अहिलेका नायकसम्म करिश्मा दिदी फिट देखिनुभएको छ। नायकको भविष्य मात्र लामो हुन्छ भन्ने हाम्रो सिने उद्योगको धारणाविपरीत करिश्मा दिदी अपबाद कै रूपमा खडा हुनुभएको छ। खासगरि विवाहपछि, अझ बच्चा जन्माइसकेपछि नायिकाहरूको फिगर स्वाभाविक रूपमै बिग्रने भएकाले पर्दा को संसारमा र्फकन गाह्रो हुन्छ, तर दिदीले गर्भास्थादेखि छोरी कविता हुर्काउने समयमा पनि घर र चलचित्र क्षेत्रलाई म्यानेज गर्न सक्नुभयो। सुन्दर मानिस घमन्डी हुन्छन् भनिन्छ, तर करिश्मा मानन्धरमा यो कुरा कुनै पनि पक्षबाट लागू हुँदैन्। उहाँ नायिका भए पनि कहिल्यै आफ्ना समकक्षी वा नयाँ नायिकाको कुरा काट्नुहुन्न, कसैलाई होच्याउनुहुन्न, उहाँको प्राथमिकतामा सधैं व्यावसायिक कलाकारिता मात्र छ। उहाँलाई नायिकामा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन, उहाँमा एउटी असल महिलामा हुनुपर्ने गुण पनि धेरै छन्। सबैका आ-आफ्ना समस्याहरू हुन्छन्, तर करिश्मा दिदी कामको सन्दर्भमा ति समस्या देखाएर भाग्नुभएन, त्यही भएर आज २५ वर्षसम्म यो उद्योगमा उहाँ टिकिरहनुभएको छ। मलाई उहाँ गर्जियस विमेन लाग्नुहुन्छ।
करिश्मा मानन्धर मलाई मन पर्ने नायिका मात्र होइनन्, बेस्ट फ्रेन्ड पनि हुन्। कसैलाई दुःख पर्‍यो भने करिश्मालाई दुख्छ, त्यही भएर मैले उनलाई नजिकको साथी मानें। सकेसम्म सहयोग गर्ने करिश्मा नेपाली चलचित्र उद्योगबाट टाढा रहन नसक्ने कलाकार पनि हुन्। त्यही भएर उनको यो क्षेत्रमा पुनरागमन भयो। सबैभन्दा सुन्दर नायिका, चर्चित व्यक्तित्वभन्दा पनि मानवीय संवेदनशीलतालाई बुझ्ने एउटा असल नागरिक हुन्, करिश्मा। उनी अ रूको भावनाको सधैं कदर गर्छिन्। आफ्ना दर्शकमाझमा रहिरहेसम्म आफ्नो स्टाटस, स्टारडमलाई त्यत्तिकै अपडुडेट राख्न सक्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान पनि छ करिश्मामा। दर्शकले राम्रो भनेका कलाकार त्यही रूपमा देखिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। सिजनअनुसारको ड्रेस सेन्स उनमा छ। मैले उनलाई सुन्दर नायिकाका रूपमा लिएको छु, त्यसैले नृत्य निर्देशकको हिसाबमा मात्र हेरेर उनको नृत्य कस्तो छ भन्ने आधारमा मूल्याकंन गर्न मिल्दैन। उनी राम्रो नतर् की होइनन्, तर नृत्य निर्देशकले नचाउन चाहँदा त्यसमा उनी खरो रूपमा उत्रन्छिन्। उनलाई नचाहँदा एउटा राम्री नायिकालाई नचाउन सकेको छु भन्ने अनुभूति हुन्छ। साथी गुरुका रूपमा मलाई उनले माया पनि गर्छिन्। गुरु दक्षिणाका रूपमा उनले आफ्नो पारिश्रमिक कटाएर मलाई मलेसिया घुमाएकी छिन्।
राजीव श्रेष्ठ, फोटोग्राफर
राजीव श्रेष्ठका दाजु राकेश श्रेष्ठ मुम्बईमा फोटोग्राफीमा संघर्ष गरिरहेका थिए। त्यही बेला प्रवेशिका परीक्षा सकेर मुम्बई घुम्न गएका राजीवलाई पनि फोटोग्राफीको चस्का पर्‍यो। दाजुले ज्याकी श्राफ, मिथुन चक्रवर्ती र श्रीदेवीको फोटोसेसन गरेको देखेर नेपाल फर्किएका राजीवले नेपाली चलचित्रकर्मीको पनि त्यस्तै फोटो खिच्ने योजना बनाए। नभन्दै छिमेकी प्रकाश अधिकारीको सहयोगले सन्तान चलचित्रकी नायिका करिश्मासँग उनको भेट भयो। यही भेटमा २०४४ सालमा पहिलो पटक करिश्माले राजीवसँग आफ्नो सेसन गराइन्। यसरी यी दुवैको मात्र होइन, नेपालको ग्लामर फोटोग्राफीमा यी दुवैले ऐतिहासिक काम गरे। 'आज त्यो फोटो सुट गरेको २५ वर्ष पुगेछ, चम्किलो अनुहार बनाउँदै राजीव भन्छन्, 'यसअघि नेपालमा सेलिब्रेटीको फोटो सुट गर्ने चलन थिएन।'
'क्लिभज शो' गरेर खिचिएको उक्त तस्बिरका कारण भर्खरै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको नेपाली सिने जगत् तरंगित भयो। करिश्माको ठूलो आलोचना भयो भने राजीवलाई त्यसो नगर्न दिग्गजहरूले नै सचेत गराए। 'त्यो बेला यस्तो फोटो सुट गर्नु नै क्रान्ति थियो।' आजका युवालाई अति सामान्य लाग्ने उक्त तस्बिर त्यस बेलाका युवाका लागि भने मनोरञ्जनको राम्रै खुराक बनेको थियो। पर्दा र कामनामा प्रकाशित उक्त तस्बिरका सयौं प्रति धुलाएको राजीवलाई ताजै छ। त्यस यता राजीव-करिश्माको जोडी २५ वर्षसम्म कायमै छ। करिश्मा प्रत्येक वर्ष राजीवसँग कम्तीमा एकपल्ट फोटो सेसन गराउँछिन्, तर उनीहरूबीच यति मात्र सम्बन्ध छैन, उनीहरू अन्तरंग मित्र पनि हुन्।
पहिलो पटक करिश्माको फोटोसेसन गर्दा उनको आँखामा जुन भोक थियो, आज पनि त्यो कायमै छ।' करिश्माका सम्बन्धमा राजीव भन्छन्, 'उनलाई पोज, मेकअप, ड्रेस, हेयरस्टाइल सबैको ज्ञान छ।' कुन उमेरमा कस्तो पोज दिने र कस्तो पहिरनले तस्बिरलाई ग्लामरस बनाउँछ भन्ने ज्ञान पनि करिश्मालाई भएको राजीवको कथन छ। त्यसैले अरूसँग सामान्य रूपमा प्रस्तुत हुने राजीव करिश्माको फोटो सेसनका लागि विशेष तयारी गर्छन्। 'म हरेकपल्ट करिश्माका अघि नयाँ फोटोग्राफर हुन्छु, उनले मलाई राम्रो फोटो निकाल्ने चुनौती दिइरहेकी हुन्छिन्।'
राजीवलाई करिश्माको मिलनसार स्वभाव मनपर्छ। त्यसैले उनी करिश्माका सबैजसो कुरामा सहयोग दिन तयार हुन्छन्। करिश्माले हतारमा विवाह गर्दा पनि राजीवलाई बोलाउन छुटाएकी थिइनन् भने अमेरिका जाँदा पनि उनीसँग सल्लाह गरेकी थिइन्। 'मलाई करिश्मा नेपाल छाडेर अमेरिका जाँदैछिन् भन्ने कुराले निकै दुःखी बनाएको थियो।' राजीव भन्छन्, 'उनी फर्किएपछि मलाई यो क्षेत्र नै उज्यालो भएजस्तो लागेको छ।
बाबु बोगटी गायक, नायक
अहिले पनि करिश्मा मानन्धरको अदा देखेर म उहाँप्रति आकषिर्त हुन्छु। म उहाँलाई दिदीका रूपमा सम्बोधन गर्छु, सानो उमेरमा पर्दामा देखेकी करिश्मासँगको भेट नै मेरो लागि ड्रिम थियो। पछि उहाँसँग काम गर्ने सपना सजाएँ, तर उमेरका कारण त्यो सम्भव हुन्छ जस्तो लागेन। यही बीच अचानक चलचित्र सायदमा मैले सपनाकी राजकुमारी करिश्मासँग काम गर्न पाएँ। त्यो पनि आफ्नो जोडीका रूपमा। सायदमा हामी श्रीमान्-श्रीमतीको भूमिकामा छौं। एउटा नृत्य पनि छ हाम्रो। उमेर अनुसार त नसुहाउनु पर्ने हो, तर करिश्माजीको मेन्टेन फिगरले उहाँसँग जोडी जमेको जस्तो मलाई लाग्छ। दिदी भर्खरकै भैदिँदा म पनि बूढो हुनुपरेन। मेरो जीवनकै मुख्य सपना पूरा भयो जस्तो लाग्छ। उहाँको त्यो भव्य व्यक्तित्वसँग आमने सामने भएर अभिनय गर्दा सुरुमा केही नर्भस भए पनि पछि सम्हालिएँ। उहाँ कत्ति व्यावसायिक कलाकार हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा भयो। त्यो सौन्दर्य, त्यो चार्म, झल्झली धपक्कै बलेको जस्तो यौवन अहिले पनि कायम छ, मैले त्यही भएर पूर्ण रूपमा आफूलाई अभिनयमा ढालेर उहाँसागको पर्फेक्ट कपल बन्ने प्रयास गरे। करिश्मा मानन्धरलाई मैले एक वाक्यमा व्याख्या गर्दा उहाँ नेपाली चलचित्र उद्योगकी राम्री, नम्र र प्रोफेसनल कलाकार हुनुहुन्छ र करिश्मासँगको मेरो अभिनय मेरो जीवनकै अविस्मरणीय क्षण हो।
बाबुराम दाहाल, संचारकर्मी
काठमाडौं आएपछि म करियरको खोजीमा थिएँ। त्यही क्रममा म करिश्माका श्रीमान् विनोद मानन्धरले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन सो क्लापको निर्माण समूहमा काम गर्न थालें। म सहरमा एक्लो थिएँ, त्यही भएर राति अबेरसम्म पनि विनोद दाइसँगै हुन्थें, त्यही क्रममा दाइले आफ्नै घरमा बस्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसपछिका पाँच वर्ष म करिश्मा मानन्धरको घरमा सँगै बसें। संगतका क्रममा थाहा भयो, उहाँ छिटो रिसाउने र तत्कालै कुल भैहाल्ने स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ। सबैभन्दा मुख्य कुराचाहिँ करिश्मा 'सफ्ट हार्टेड' स्वभावको भएको पाएँ। करिश्माको सुन्दरताको कुरा गर्नु आवश्यक नै छैन, साथसाथै उहाँको अभिनय क्षमता पनि उत्तिकै राम्रो हो, तर आकर्षक शारीरिक बनावट यसरी हावी भैदिएको छ कि उहाँको अभिनय पक्ष त्यहाँनेर कमजोर देखिएको छ। एउटा बलियो परिचयले अरू परिचयलाई फिक्का बनाउँछ भनेजस्तै। उहाँले जति चरित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ, सबैमा न्याय गर्नुभएको छ। करिश्माजत्तिकै सुन्दर अरू नायिका पनि यो उद्योगमा आए, तर सबै बीचमै हराए, आजसम्म उहाँको उपस्थिति नै चर्चा योग्य छ। करिश्मा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अग्रसर हुन चाहने व्यक्ति हो, तर उहाँले त्यो क्षेत्रमा खुलेर काम गर्न पाउनुभएको छैन, मेरो विचारमा उहाँले धेरै लाई सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ।